घर अफ्रिकन स्टर्न्स बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
अक्टोबर 5, 2019
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू। आर्सेनल एफसी लाई क्रेडिट
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वोत्तम उपनाम संग ज्ञात "साकिन्हो“। हाम्रो बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खातामा ल्याउँदछ।
बुकायो साकाको जीवन र उदय। क्रेडिट सूर्य र नेटथरय
विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा र क्यारियर निर्माण, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रख्यात कथाको लागि उनको मार्ग, प्रख्यात कथा, सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्यहरू र जीवनशैली आदि शामिल छ।
हो, सबैले उसलाई बच्चा-अनुहार देख्ने विger्गर जस्तो महान फुटबल सम्भावनाको रूपमा हेर्दछन्। यद्यपि केवल थोरैले बुकायो साकाको जीवनीलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
Bukayo Saka मा जन्म भएको थियो 5th दिन सेप्टेम्बर 2001 ब्रिटेनको लन्डन शहरमा नाइजेरियन अभिभावकहरूलाई। उनका आमाबुवा नाइजेरियन आप्रवासीहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जन्म हुनुभन्दा अघि नाइजेरिया छाड्नुभयो लन्डनमा बसोबास गर्न र बाँच्नका लागि अवसरहरूको खोजीमा।
उनको जन्म पछि, उसका आमाबुबाको नाम राखियो "बुकायो"जुन एक युनिसेक्स नाम हो जसको अर्थ हो"खुशीमा थप गर्दछ "। बुकायो बारम्बार प्रयोग हुने नाम हो दक्षिण पश्चिम नाइजेरियाको योरूबा जनजातिद्वारा। निहितार्थको अर्थ यो हो कि बुसायो साकाको परिवारको उत्पत्ति नाइजेरियाको योरूबा जातीय समूहबाट भएको हो।
Saka एक कम मध्यम वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमि मा ब्रिटेनको राजधानी लन्डनमा हुर्कनुभयो। उनका बुबा र आमा प्रायजसो नाइजेरियन आप्रवासीहरू जस्तै थिए जसले उत्तम वित्तीय शिक्षा थिएन तर साधारण रोजगार थियो र प्रायः पैसाको साथ संघर्ष गर्नुपर्दा परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न युके र दुबै नाइजेरियामा।
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर निर्माण
लण्डनका प्रायजसो नाइजेरियनहरू जस्तै बुकायो साकाका परिवारका सदस्यहरू फुटबलको लागि उत्सुक थिए। यो उनीहरूको फुटबलप्रति प्रेम र आफ्नो जीवनस्तर उकास्नको अनूठो चाहनाले गर्दा लण्डनमा बुकायोको फुटबल शिक्षा रहेको कुरा पनि हो।
Hफुटबल-मायालु आमाबाबुलाई बचाउने जसले आर्सेनललाई समर्थन गर्थे, युवा बुकायोको लागि आफ्नो क्लबको एकेडेमीमा राख्न ध्यान केन्द्रित गर्नु स्वाभाविक हो। बुकायो साकाका बुवाले आफ्नो सफलता सफल प्रतिष्ठानको टेक्नोलोजीमा आफ्नो छोरालाई निराश र नम्र रहन सुनिश्चित गर्ने एकमात्र जिम्मेवारी लिनुभयो। बुकायोको शब्दमा;
'मेरो बुवा मेरो लागि ठूलो प्रेरणा हुनुहुन्थ्यो। जबदेखि म जवान थिएँ, उसले मलाई सधैं मैदानमा राख्यो '।
मा आर्सेनल फुटबल एकेडेमीका लागि आवेदन मात्र साँच्चै प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको लागि उपलब्ध थियो। किनभने उसको बुबाआमा बुकायोलाई के थाहा थियो थाहा छ, उनीहरू लागू गर्न हिचकिचाएनन्। धन्यबाद आर्सेनल एकेडेमी बोलाए र उनले आफ्नो परीक्षण प्रमाणित गर्दै आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरे। यस समयमा, उनका अभिभावक र परिवारका सदस्यहरूको गर्वको कुनै सीमा थिएन।
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
Saka संग आफ्नो क्यारियर शुरू भयो शस्त्रागारउसको हेल एंड एकेडेमी त्यति सजिलो थिएन किनकि यो उसको र उसका आमा बुबा दुवैले धेरै बलिदानहरूले भरिएको थियो। उसको शब्दमा;
"मेरा बाबुआमाले मलाई यहाँ आउन मद्दत गर्नु एकदम संघर्ष गर्नु भएको थियो तर उनीहरू जहिले पनि आफ्ना सबै चीजहरू दिए र मलाई तालिम दिए"।
यस संघर्षले Saka लाई धेरै प्रेरणा प्रदान गर्‍यो जसले उनलाई सँधै कडा मेहनत गर्न मद्दत पुर्‍यायो र सुनिश्चित गर्यो कि उसले आफ्नो सर्वश्रेष्ठ प्रदान गर्यो। आफ्ना टोलीका साथीहरू जस्तै, सकाले पनि एउटा मूर्ति रोजे। अरूहरू साथ गए थियरिरी हेनरी, डेनिस बर्गकोम्प, आदि, उनले पूर्व स्विडेनी र आर्सेनल पौराणिक कथा, फ्रेडी जुj्गबर्गलाई छान्नुभयो जो क्लबमा पहिले नै युवा कोच थिए।
फ्रेड्डी जुung्गबर्गले बुकायो साकालाई उनी हुन आजका लागि सहयोग गरे। छवि क्रेडिट- Football365
एक U15 एकेडेमी खेलाडी को रूपमा, फ्रेडी Ljungberg बुकायो Saka सबै भन्दा राम्रो सल्लाह दिए। उनले सकालाई नम्र रहन र थप कडा परिश्रम गर्न मद्दत गरे किनभने उनको विश्वास छ कि सानो छोरा कुनै समय शीर्ष खेलाडी बन्ने छैन।
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
फ्रेडी ल्युung्गबर्गले उनी बारे भविष्यवाणी गरेका सबै कुरा पूरा भए। जसरी Saka 17 वर्ष पुरानो भयो, उनलाई आर्सेनल द्वारा एक पेशेवर सम्झौता दिइयो र अन्डर- 23 पक्षमा पदोन्नति गरियो। साथै, प्रभावशाली प्रदर्शन को एक श्रृंखला पछि, Saka पनि क्लब को वरिष्ठ टीम मा बोलाइएको थियो।
वरिष्ठ टीमसँगै हुँदा उनले आफ्नो क्यारियर प्रज्वलित गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिस्पर्धी खेलमा अवसर खोज्न थाले। प्रतियोगिताको कुरा गर्दै, अलेक्स इवोबी र विस्थापन गर्दै हारून रस्सी उनको साथी एकेडेमी साथी भन्दा ठूलो चुनौती थियो रेस नेल्सन। बहुप्रतीक्षित मोड़ पहिलो बिन्दु 2018 / 2019 यूरोपा लिग फाइनलमा आयो जहाँ शाकाले पहिलो पटक प्रभावशाली प्रदर्शनको साथ आफ्नो छाप छोडे।
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
2018 / 2019 सिजनको अन्त दुबै देख्यो हारून रस्सी र Alex Iwobi जुवे र एभर्टनको लागि क्रमशः आर्सेनल छोड्दै। यसले बुकायोलाई कोठामा कम प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पारेको छ, जसमा उनका कार्यकर्तामा केवल एक व्यक्ति वामपन्थी स्थितिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न।
19 सेप्टेम्बरमा 2019 बुकायो सकालाई र उसको बीचको दुश्मनीमा रेस नेल्सनको छेउमा भएको देखे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… त्यस दिन, उसले स्कोर मात्र गरेन, उसले दुई राम्रा सहयोगहरू पनि प्रदान गर्‍यो किनभने आर्सेनलले 3-0 लाई इन्ट्राक्ट फ्रान्कफर्टको बिरूद्ध उनीहरूको 2019 – 20 UEFA यूरोपा लिगको समूह समूहमा जित्यो। तल भिडियो प्रमाणको एक टुक्रा छ।
जब बुकायो सकाले बाल्यावस्थामा उनको पहिलो आर्सेनल गोल स्कोर गर्ने सपना पूरा गरे, तब उनले आफ्ना बुवालाई द्रुत फेसटाइम कल दिए। “म उनीसँग कुरा गर्न सक्दिन किनकि कोचहरू खेलको पछि छिट्टै निको हुन म बरफको स्नानमा जान चाहन्छन्। हामी केवल एक अर्को माथि हाम्रो औंठा माथि राख्यौं" उसले भन्यो।
सामान्य सुरुवातको साथ कुचल्नुको सट्टा, देब्रे-विger्गर शक्तिबाट मजबुतमा जान्छ। At 18 वर्ष र 125 दिन पुरानो, Saka प्रिमियर लिग ईतिहासको सबैभन्दा कान्छो आर्सेनल वरिष्ठ प्लेयर स्टार्टर बन्यो म्यान Utd बनाम आर्सेनल संघर्ष सुरु गर्न। उनले खेलमा विस्थापन गरेर प्रशंसकहरूलाई पनि चकित पारे एशले जवान.
लेख्ने समयमा, बुकायो साका अधिकांश फ्यानहरूले फ्रेन्डी लजungबर्ग पछि आर्सेनल बायाँपन्थी पुस्तालाई अर्को सुन्दर वाचाको रूपमा देखेका छन्। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
सफल भएको र अंग्रेजी फुटबलको विशाल मागहरूको लागि उठ्नको लागि, यो निश्चित छ कि बुक्तायो साकाको प्रेमिका वा पत्नी छ कि छैन भनेर अधिकांश प्रशंसकहरूले सोधेको हुनुपर्छ। हो! उसको प्यारो बच्चाको अनुहार आफ्नो खेलको शैलीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ तर पक्कै पनि उसलाई केटीको प्रेमीका लागि उच्च राखिन्छ।
बुकायो साकाको प्रेमिकाको बारेमा सोधपुछ। क्रेडिट Sortitoutsi
धेरै अनुसन्धान पछि, यो बुकायो Saka अविवाहित देखिन्छ (लेखन को समय मा)। हामीलाई थाहा छ कि शीर्ष फ्लाईट अ English्ग्रेजी फुटबलको अन-माफी प्रकृतिका कारण, साकाले आफ्नो क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाउनुको सट्टा प्रेमिका वा कसैलाई उनकी पत्नी हुन खोज्नुको सट्टा।
यस क्षणमा, हामी भन्न सक्दछौं कि साकाले आफ्नो निजी जीवनमा कुनै पनि स्पटलाइट नहुनको लागि सचेत प्रयास गरेका छन्। यो तथ्यले हामी जस्तो ब्लगर्सलाई उसको प्रेम जीवन र डेटि history ईतिहासको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न गाह्रो बनाउँदछ। यद्यपि यो अझै सम्भव छ कि उसको एक प्रेमिका हुन सक्छ तर यसलाई सार्वजनिक नगर्न रुचाउँदछ, कम्तिमा अहिलेको लागि।
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
बुकायो सका व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू चिन्नुले तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ फुटबल मामिलाबाट टाढा।
बुकायो साका व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू। ट्विटरमा क्रेडिट
उसलाई भेट्ने क्रममा, तपाईंले बुकायो साकाको जीवन बुझ्नुहुनेछ र एक संगठित जीवन बिताउनको लागि एक विधिगत दृष्टिकोण लागू गर्नुहुन्छ। साथै, उहाँ धेरै मिलनसार र तल-देखि-पृथ्वी व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन प्रशंसकहरूको लागि धेरै नै खुल्ला हुन्छ। प्रशिक्षणको क्रममा, उनले विवरणको सब भन्दा सानोमा ध्यान दिन्छ र केही कुराको लागि बाँकी नरहेको सुनिश्चित गर्दछ।
नाइजेरिया र युनाइटेड किंगडममा पनि, बुकायो साकाका मित्रहरू र देशवासीहरूले उहाँलाई कुनै मूल्यमा सुरक्षित राख्नुपर्ने राष्ट्रिय खजानाको रूपमा देखे। तलको भिडियो हेर्नुहोस्।
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
बुकायो साकालाई राम्रो र नराम्रो दुवै समयमा आफ्ना पुर्खाहरू र नाइजेरियाली जरामा गर्व छ। को रूपमा रोटी बनाउने व्यक्ति, उनी आफ्नो परिवारको आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि आफ्नै बाटो जाली गरेर खुशी छन् सबैलाई धन्यवाद FOTTALL.
बुकायो साका परिवारका सदस्यहरू र आफन्तहरू; उनका आमा, बुबा, भाइहरू, बहिनीहरू, काका, काकी, आदि, वर्तमान अंग्रेजी अ football्ग्रेजी फुटबल मामिलाको हेलममा आफ्नो आफ्नै भएको फाइदा काटिरहेका छन्। अहिले, कउसका परिवारका सदस्यहरू र आफन्तहरूको सबै ll छ सामाजिक मिडियामा जडान गर्ने धेरै तरीकाहरूको बावजुद सार्वजनिक मान्यता खोज्नको लागि सचेत छनौट गरे।
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - LifeStyle
पिचमा व्यावहारिकता र खुशीको कुरा यो बुकायो सकाका लागि दुई फरक संसार हो जहाँसम्म उसको जीवन शैलीको सवाल हो। यद्यपि उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ बनाउने फुटबलमा पैसा आवश्यक छ, तर उसको बलियो ग्राउन्डि्गले उसलाई आफ्नो वित्त जाँचमा राख्न र व्यवस्थित गर्न मद्दत गरेको छ।
लेख्ने समयमा जस्तै, बुकायो साकालाई जीवनशैली बन्न अनुमति छैन जुन महँगो महँगो कारहरू, हवेलीहरू इत्यादिको एक हड्तालले सजिलै देख्न सक्दछ।
बुकायो साका जीवनशैली- उनी महँगो जीविकाको लागि औषधी हुन्
फ्ल्याश कारको आधुनिक फुटबल संसारमा र धेरै सामाजिक मिडिया पोस्टहरूले धन र महँगो जीवनशैली प्रदर्शन गर्दछ, हामी भन्न सक्दछौं कि बुकायो साका एक स्फूर्तिदायी औषधि हो।
बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
एकेडेमीमा उनी एक्लो नाइजेरियन थिएनन्: आर्सेनल एफसी एकेडेमी छिटो नाइजेरियन मूलका धेरै खेलाडीहरूको घर भइरहेको छ। भर्खर लेखनको समयदेखि नै, एकेडेमीले नाइजेरियाली जराका चार प्रतिभाशाली प्रतिभाहरुलाई छात्रवृत्ति सौदे प्रदान गर्‍यो - बाँयादेखि दायाँ आर्थर ओकोनको, आर्मस्ट्रांग ओकोफ्लेक्स, जेम्स ओलाइन्का र जेभियर अमेची।
एकेडेमीमा अन्य नाइजेरियन ताराहरू। क्रेडिट सूर्य, बीबीसी, आर्सेनल कोर र फ्लिकर
धर्म: तल देखाइएको अनुसार, उनको इन्स्टाग्राम क्याप्सन पढ्छभगवानको बच्चा"र यो क्याप्सन उसको टीमका साथी जो विलोकसँग मिल्दोजुल्दो छ। हाम्रो लागि, बुकायो साकाको धर्म इसाईमतको उच्च सम्भावना छ।
बुकायो साकाको धर्म- वर्णन गरिएको छ। आईजी लाई क्रेडिट
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो बुकायो साका बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
नाइजीरिया फुटबल डायरी
अक्टोबर 22, 2017
लाइटन ब्यान्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य
11 सक्छ, 2018